ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): April 2008
ဒုတိယအကြိမ် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:55 AM 1 comments Links to this post
Labels: Events, Invitation, Myanmar, News And Activities, Overseas Burmese Patriots, Strongly Suggestion
ရဲရဲတောက် NO ကန့်ကွက်မဲများနှင့် ဧပရယ်လ်၂၇ မှတ်တမ်း
တစ်ခေါက်ကြည့်တိုင်း ရင်ထဲကိုတစ်ဖန်ပြန်တုန်ခါစေတဲ့ ၂၇ရက်နေ့ စင်္ကာပူမှ ကြက်ခြေခတ် ကန့်ကွက်မဲပေးရက်မှတ်တမ်းလေးပါ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:04 PM 8 comments Links to this post
ယနေ့ ၂၈ရက်နေ့ မြန်မာသံရုံးမှာ အခြေအနေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာစုံစမ်းနေသော မျိုးချစ်မြန်မာများထံမှ လက်ခံရရှိသော သတင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့မှစ၍
၁) သံရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ဖူးသူများ ( ကျောင်းသား ၊ မှီခိုထောက်ခံစာရှိသူများ .. သို့မဟုတ် .. အခွန်ဆောင်ထားဖူးသူများ ) နှင့်
၂) မြန်မာနိုင်ငံသား ပါ့စ်ပို့သက်ဝင်ရှိနေသူများ အားလုံး ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်တွင် ချက်ချင်းလက်ဝယ် မဲပေးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ မနက်၉နာရီမှ ညနေ၆နာရီခွဲတိတိထိ မြန်မာသံရုံးမှ အလုပ်လုပ်မည်။ မဲမပေးရသေးသူများ ကျေးဇူးပြုပြီး ကန့်ကွက်မဲသွားပေးပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့မှစ၍ သံရုံးနှင့်မဆက်သွယ်ဖူးသူများက အမည် ၊ အသက် ၊ မိဘအမည် ၊ စင်္ကာပူရှိနေရပ်လိပ်စာ နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နာပါတ်တို့ကို ဖြည့်စွက်ပြီး သံရုံးမှာ စာရင်းသွားပေးထားရပါ့မယ်။ မြန်မာသံရုံးဘက်မှ မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် ထိုသူများဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ၂၉ရက်နေ့မနက်တွင် တရားဝင်စာဖြင့် ကြေငြာပေးပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သတ် မေးမြန်းလိုပါက စင်္ကာပူမြန်မာသံရုံး 67350 209 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Update : ဆန္ဒမဲမပေးရသေးသော မြန်မာများ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရန်အတွက် စင်္ကာပူရှိမြန်မာသံရုံးမှ ၃၀ရက်နေ့မှ ၂ရက်နေ့ထိ သုံးရက်ဆက်တိုက် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာစာဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးရက်ကို တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ပါပြီ .. ။ မဲပေးရမည့်သူအားလုံးအတွက် သုံးရက်အပိုထွက်လာပါပြီ။ မပျက်မကွက် အားလုံး ကန့်ကွက်မဲသွားပေးပါရန် ထပ်မံနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့မှစ၍ သံရုံးဖြင့်မဆက်သွယ်ဖူးသူများ (ကျောင်းသားထောက်ခံစာ ၊ မှီခိုထောက်ခံစာမရှိသူများ ၊ အခွန်မဆောင်ထားသူများ)ကတော့ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သံရုံးဖြင့်ဆက်သွယ်ထားဖူးသူများအားလုံးကတော့ ချက်ချင်းလက်ဝယ် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 3:22 PM 8 comments Links to this post
ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသော နေရောင်ခြည်က ရင်ထဲကဆန္ဒအလျောက် ကန့်ကွက်မဲပေးကြမည့် စင်္ကာပူရှိ မြန်မာများကို အားပေးနေသည့်အလား စူးရှစွာ အလင်းဖြာပေးနေသည့် ဧပရယ်လ် ၂၇ ရက် .. ။ နိုးတံဆိပ်ပါ အနီရောင်တီရှပ်များဝတ်ဆင်လျက် ၊ ဦးထုပ်များဆောင်းလျက် .. တက်ကြွစွာ ချီတက်လာသော မြန်မာလူထုအင်အားက တဖြေးဖြေး မြန်မာသံရုံးရှေ့လမ်းသွယ်လေးပေါ်မှာ ပြည့်ကျပ်လာခဲ့သည် .. ။ စည်းကမ်းရှိစွာ အားလုံးတန်းစီကြရင်း ဖြည့်စွက်ထားသော မိမိနာမည်ခေါ်ဆိုသံကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသော မြန်မာများအင်အားက ရဲရဲတောက်လျက် .. ။ နေမွန်းတည့်ချိန်ကျော်လာလေ လူထုအင်အား လေးထောင်ခန့်ရှိလာပြီး မျက်လုံးများက မြန်မာသံရုံးဆီမှ ထွက်ပေါ်လာမည့်အသံကို စောင့်ဆိုင်းနေကြလျက်။ ကားပေါ်မှ အလျိုလျိုဆင်းလာကြသော မြန်မာများ ၊ မိမိအစီစဉ်ဖြင့်လာကြသော မြန်မာလူထုအင်အား .. အားလုံးစုံညီစွာ တန်းစီလိုက်ကြချိန်မှာ မြန်မာသံရုံးလမ်းသွယ်လေးမှ အော့ချပ်လမ်းမပေါ် Tanglin Mall ရှေ့ဘက်ခြမ်း မီးပွိုင့်အနီးထိ အလွန်ရှည်လျားသော လူတန်းကြီးဖြစ်သွားသည်။
မနက်၉နာရီမှ နေ့လည် ၁နာရီဝန်းကျင်ထိ မြန်မာသံရုံးမှ ဆန္ဒမဲပေးရန် နာမည်များကို ခေါ်ဆိုပြီး များပြားလွန်းလာသော မြန်မာလူထုအင်အားကို ထိတ်လန့်စွာ နေ့လည်၁နာရီမှ ၄နာရီအတွင်းကို အလုပ်လုပ်ခြင်း လုံးဝရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ် .. ။ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ မေးခွန်းများကို မျက်ကွယ်ပြုလျက် တစ်စုံတစ်ရာမျှ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုသော သံရုံးဝန်ထမ်းများ၏ စာနာခြင်းနှလုံးသားအတွက်တော့ အမှန်တကယ် အော့နှလုံးနာစရာပါ .. ။ စင်္ကာပူရဲများကလည်း တင်းကျပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေသလို ဟိုနေရာတစ်စု .. ဒီနေရာတစ်စု .. ။
ကန့်ကွက်မဲအင်အားကို ဖော်ပြနေသော အနီရဲရဲ နိုးတံဆိပ်ပါတီရှပ်များကြောင့်လော ၊ မူလကတည်းက စီစဉ်ထားသော ကောက်ကျစ်သည့် အစီစဉ်ကြောင့်လော ... မြန်မာသံရုံးဘက်မှ ပြည်သူလူထုအင်အားကို ကြောက်ရွံ့စွာ ၂၆ရက်နေ့လောက်ပင် အသံထွက်မလာတော့ပါ။ မြန်မာသံရုံးဘက်မှ ပြည်သူများကို မဲပေးခွင့်အများအပြားမပြုသည့်အတွက် စင်္ကာပူရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများအားလုံးက ငြိမ်သက်စွာ စောင့်ဆိုင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်များအဖွဲ့မှ အေးအေးဆေးဆေး ကြိုးစားဆွေးနွေးခဲ့ကြချိန် မဲရုံမှူးမှ `မဲလက်မှတ်ကုန်သွားတဲ့အတွက် ၂၈ရက်နဲ့၂၉ရက်နေ့မှာ ညဉ့်နက်ချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ပေးပါ့မယ်´ဟု နှုတ်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုစကားကို အတိအလင်း ပိုမိုသေသေချာချာဖြစ်စေရန် တရားဝင်စာဖြင့် သံရုံးရှေ့မှာ ကြေငြာခိုင်းခဲ့ပေမယ့် မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများမှ တစ်ခွန်းတစ်လေမျှ ထပ်ပြောခြင်း ၊ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိခဲ့ ... ။ စည်းကမ်းရှိစွာ ၊ ငြိမ်သက်စွာ .. မောပန်းနွမ်းနယ်မှုများဖြင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြသော မြန်မာလူမျိုးများအားလုံး၏ ရင်ထဲမှမြည်သံများဖြင့် ထိုမြို့လယ်လမ်းပေါ်မှာ ပြည့်ကျပ်လျက် ... ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:58 PM2comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:09 PM6comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:11 PM 10 comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:53 AM2comments Links to this post
စင်္ကာပူရှိ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွန်မဆီ နေ့စဉ်အချက်အလက်တွေကို ပေးပို့ပေးနေတဲ့ ကိုဂျေမိုးကို လေးစားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောလိုပါတယ် ။ မြန်မာသံရုံးရဲ့ အတားအဆီးများကြား ၊ အမေးအမြန်းပေါင်းများစွာကြားမှ ဒီလိုဓါတ်ပုံတွေကို ရအောင်ရိုက်ကူးပေးလာတဲ့အတွက်လည်း အံ့သြလေးစားမိပါတယ်။ Asean Summit ဆန္ဒပြပွဲမှာအစပြုပြီး မိတ်ဆွေရင်းတွေလို လက်တွဲလှုပ်ရှားခဲ့ကာ ယနေ့သူ့ခြေလှမ်းတွေအတွက် အားကျမိသလို လက်ရှိ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှာ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုဂျေမိုးအတွေ့အကြုံကို မိတ်ဆွေတို့ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများသည် မကြာခင်ကျင်းပတော့မည့် ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအား ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်က စင်္ကာပူနိုင်ငံသံရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
သံရုံးသို့ရောက်ရှိချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ ခန့်မှာ သံရုံးဝန်ထမ်းများ အစည်းအဝေးလုပ်နေသောကြောင့် နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၀ ခန့်မှာ အလုပ်ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအား မည်သို့မည်ပုံ မဲပေးကြရမည်ဆိုသည့် စာများကို သံရုံးနံရံများမှာ ကပ်ထားတာတယ်လို့လဲသတင်းရရှိပါတယ်။
သံရုံးရှိ ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်းအား မဲပေးရမည့်ပုံစံ မဲရုံနဲ့ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်း အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။သို့သော်လည်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦးမြင့်ထွန်းအား ၂၃ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ခန့်တွင် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဦးမြင့်ထွန်းမှပြောကြားရာမှာ - အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်များဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် သံရုံး၌ ထားရှိကြောင်းနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးအနေနှင့် မဲရုံမှူးများလမ်းညွန် အတိုင်း မဲပေးမည့်သူများကို လျို့ဝှက်မဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးရန်လာရောက်သူများ အနေနှင့် သံရုံးမှ ပေးသော လျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပြီး၊ မဲပြားနှင့် စာအိတ်ကို ရယူရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိပေးလိုသောဆန္ဒအတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှို့ဝက်မဲပေးနိုင်ရန် သံရုံးမှ စီစဉ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မြန်မာသံရုံးတွင် ခွန်လာရောက်ပေးဆောင်နေကြသူများနှင့် အခြားသံရုံးနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများအတွက် ရောက်ရှိနေသူများ အားလုံး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၂၀ ကျော်ဝန်းကျင်ခန့် ရှိနိုင်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
မြန်မာအရေးတက်ကြွသူများအနေနှင့် ဦးမြင့်ထွန်း၏ လမ်းညွန်မှုကြောင့် အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစားအုပ်ကို ဖတ်ရှုရန် Consular Section မြန်မာသံရုံးအခေါ် ကောင်စစ်ဌာနတွင် တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်လည်း မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများမှ အထက်အရာရှိသို့ အဆင်ဆင့်တင်ပြကာ အချိန်ဆွဲထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၊ ညနေ ၃နာရီ ခွဲ နောက်ပိုင်းမှသာ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်ကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်နှင့်အတူ (၁၉၄၇ ခုနှစ် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှိုင်းယှဉ်ချက်များ စာအုပ်ငယ်) ၊ (၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြချက် စာအုပ်ငယ်) တို့ကို ရယူရန် သက်သေခံအဖြစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ မိမိအား တရားဝင်ထုတ်ပေးထား အိုင်စီ ကဒ်ပြားကို ကောင်စစ်ဌာနမှာ အပေါင်းထားပြီးမှ ဖတ်ခွင့်ရတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
သံရုံးတွင်ဖတ်ရှုနိုင်သော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်၊ အခန်း(၁၂) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း အခန်း အပိုဒ် ၄၃၆။(က) တွင်ဖေါ်ပြထားသော "ပြဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပြင်ဆင်ရန် သဘောတူလက်ခံပြီးနောက် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမည်။
ဆိုတဲ့နေရာမှာ လက်ရေးဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ (ထက်ဝက်ကျော်) ဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ရမည်။ (ထက်ဝက်ကျော်) ကိုလက်ရေးမူဖြင့် ပြင်ဆင်ရေးသားထားသည် ကိုဖတ်ရှုကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ၄င်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဖတ်ရှုသူများမှ သံရုံးဝန်ထမ်းများကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ သံရုံးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သိပ်နားမလည်ကြောင်း စာအုပ်ထဲတွင်ဖေါ်ပြထားသော အရာများအားလုံးမှာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ထူးဆန်းတာကတော့ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများ မြန်မာသံရုံးသို့ရောက်ရှိချိန်တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမီးသတ်မှ မြန်မာသံရုံးမှာ မီးလောင်ကြောင်းသတင်းပေးလာသောကြောင့် မီးငြိမ်းသတ်ရန် ရောက်ရှိလာကြောင်းကို သံရုံးသို့ယနေ့ရောက်ရှိခဲ့သူ မျက်မြင်သက်သေများပြောပြချက်အရ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ တယ်လီဖုန်း Message ရရှိသူများလဲ ထိုသတင်းအား ဖတ်မိကြမယ်ထင်ကြောင်းနှင့် မည်သူ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အတည်ပြုပြောကြားနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။
မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများအနေနဲ့လည်း လာမည့် (၂၇) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မှာအားလုံးပြိုင်တူ မြန်မာသံရုံးကို မဲသွားရောက်ပေးကြမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ရရှိနေပါတယ်။ သံရုံးမှ ပေးပို့ထားသောစာများမှာ အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၃၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး စာတိုက်မှ သံရုံးသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော စာများမှာ အစောင်၄၀၀ခန့်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
သံရုံးသို့ဆန္ဒမဲပေးရန်လာရောက်သူများကို သံရုံးမှပေးပို့ထားသော စာရင်းနှင့်တိုက်ကာ မဲပေးခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် သံရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ထားဖူးသူများဖြစ်သော်ငြားလည်း ဖိတ်ကြားစာမရရှိသူများအတွက်ကိုမူ သံရုံးမှ မှတ်တမ်းများပြုစုရယူထားပြီး နောက်ရက်များမှာ လာရောက်မဲပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်လို့ ဦးမြင့်ထွန်းကိုယ်တိုင် ဖုန်းမှတဆင့် ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ သံရုံးဖက်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း ရှိပါသလားလို့ မေးမြန်းခဲ့တာကိုတော့ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်လောက်အောင် ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပေမယ့်လည်း မြန်မာသံရုံးမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံအာဏာပိုင်များ အကူအညီဖြင့် သံရုံးလုံခြုံရေးများစီစဉ်ထားကြောင်းကိုတော့ ဦးမြင့်ထွန်းမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
(၂၄)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှ စတင်ကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသော အခွန်အကောက်လုပ်ငန်းများနှင့် သံရုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားလုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ရန်တန့်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးရန် အတွက် လိုအပ်သည်များကိုသာ စတင်ပြင်ဆင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမြင့်ထွန်းမှပြောပြသွားကြောင်း စုပေါင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဂျေမိုး ဧပြီ ၂၃ ရက် ၂၀၀၈။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:32 PM 1 comments Links to this post
Labels: Myanmar, News And Activities
စင်္ကာပူက ကန့်ကွက်မဲ စည်းရုံးရေး မူကြမ်းစာအုပ် (၈) အုပ်၊ လူတစ်သိန်း နှင့် Ms. Anna
ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာများအား သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ သံရုံးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ပေးလျှက်ရှိကြပါတယ်၊ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန် အစရှိတဲ့နိုင်ငံများမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများမှ မြန်မာများထံသို့ စာတိုက်မှ တဆင့် စာများလိုက်လံပေးပို့နေပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲများ ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်း လာမည့် ဧပြီလ ၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉ ရက်များတွင် ဆန္ဒမဲများကို ကြိုတင်ကောက်ခံမည်လို့ သိရပါတယ်၊ ထိုသို့ဆန္ဒမဲကောက်ခံပွဲများမတိုင်မှီ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှ တက်ကြွစွာဖြင့် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများကို မိမိတို့ နီးစပ်ရာမှာ တနိုင်တပိုင် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့အရေးနိုးကြားတက်ကြွသူများမှ မြန်မာအလုပ်သမား အများစု စုဝေးနေထိုင်ကြရာ
Worker's Dormitory များသို့ သွားရောက်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒမဲပေးရေး လှုတ်ရှားမှုများကို ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်မာပြည်မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့် ရောက်ရှိနေကြပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာအလုပ်သမားများအနေနှင့် ၄င်းတို့မသိရှိသေးသော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း၌ ပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည့် အချက်အလက်များကို မေးမြန်းခြင်းများနှင့် စင်္ကာပူရှိ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများ၊ အသင့်ယူဆောင်လာသော စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွသူများသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ဘွန်လေး Boonlay, မန်ဒိုင်း Mandi, ကာကီဘူကစ် Kaki Bukit, ဂျလန်ကာယု Jalan Kayu ၊ Woodlands ရပ်ကွက်၊ ဂျွိုင်းတာဝါ Joy Tower အနီးနားတ၀ှိုက်ရှိ မြန်မာအလုပ်သမားအများစုနေထိုင်ရာ Worker's Dormitory များနှင့် မြန်မာအများစု စုဝေးရာနေရာများမှာ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်လံပြုလုပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ တချို့ နေရာများမှာ မြန်မာများ လူဦးရေ ရာဂဏန်းအထိ စိတ်ဝင်တစား လာရောက်နားထောင်ကြသည် ကိုတွေ့ကြရပြီး တချို့ နေရာများမှာတွင်မူ လူဦးရေ ၅၀ -၃၀ -၂၀ စသည်ဖြင့် လာရောက်နားထောင်ကာ အပြန်အလှန် မေးခွန်းများမေးကြကြောင်းနှင့် ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းများရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
၄င်းအပြင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်ကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် လေ့လာဖတ်ရှုခွင့် ရရှိနိုင် မရှိနိုင်ကို သိရှိနိုင်ရေးအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားအများစုနှင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးအား ဧပြီလ ၂၂ ရက် အင်္ဂါနေ့ မှာလည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအနေဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စမှန်သမျှကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးဖို့ရာ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရသော ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရဖို့ရာ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်းမှာမူ တနေကုန်အောင် အလုပ်မအားလပ်ပါသဖြင့် မေးခွန်းတချို့ ကို မြန်မာသံရုံးမှ တယ်လီဖုန်း ဒိုင်ခံဖြေကြားပေးသော ရုံးတာဝန်ခံ Ms. Anna မှတဆင့် ဦးမြင့်ထွန်း အားမေးမြန်းပေးခဲ့ပြီး၊ ဦးမြင့်ထွန်း၏ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်များကိုလည်း Ms. Anna မှပဲ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာများ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် မြန်မာသံရုံး၌ ရယူနိုင်ပါသလား? ဟုဆိုသောမေးခွန်းကို့ ဦးမြင့်ထွန်းအား Ms. Anna မှတဆင့် မေးမြန်းပေးပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးလိုက်တယ်။
"စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုလိုပါလျှင် Consular Office Counter မှာ လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းနှင့် သံရုံးပြင်ပသို့ယူဆောင်သွားခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း" ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သံရုံးသို့ ညနေဘက်တွင် လာရောက်လေ့လာဖတ်ရှုချင်ကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းအားလည်းပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးမှာ ညနေ ၅ နာရီအထိသာ ဖွင့်လှစ်ပါသဖြင့် ၄င်းကိစ္စမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အထူးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်မှာ သံရုံးတစ်ရုံးလုံးတွင်မူ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ် စုစုပေါင်း (၈) အုပ်သာရှိပါသောကြောင့် တစ်ကြိမ်ထဲတွင် လူအများအပြား လာရောက်ဖတ်ရှုဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
သံရုံးပိတ်ချိန်ရောက်သည်အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေးနဲ့ပတ်သက်သောကိစ္စတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရန် အထူးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားသော ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်းအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် တောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့်လည်း အင်္ဂါနေ့ ညနေသံရုံးပိတ်သွားချိန်အထိ ခွင့်ပြုချက်မရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
သို့သော်- စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလိုလားသူများအနေနှင့် ဆန္ဒခံယူပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ပေးထားသော "မဲရုံမှူးလမ်းညွန်" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိနားလည်နိုင်ရန်အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် သွားရောက်မေးမြန်းကြမည်လို့လဲ သတင်းများရရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသူစာရင်းမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံထုတ် The Strait Time သတင်းစာအရ လူဦးရေ တစ်သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့သိရပြီး၊ အဲဒီတစ်သိန်ထဲတွင်မူ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဦးရေမှာ ငါးသောင်းအထက်ရှိပြီး ကျန်ငါးသောင်းမှာမူ့ မှီခိုနေထိုင်သူမိသားစုနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများဖြစ်ကြတယ်လို့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူ ကုမ္မဏီကြီးတစ်ခုမှ အလုပ်သမားရေးရာ ကိုင်တွယ်သူ အရာရှိတစ်ဦးရဲ့  အဆိုအရ သိရှိရပါတယ်။ ယခုလိုမြန်မာသံရုံးမှ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်ကို စင်္ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံးရှိမြန်မာများ ဖတ်ရှုဖို့ရန် မူကြမ်းစာအုပ် (၈) အုပ်သာစီစဉ်ထားခြင်း အပေါ်မည်သို့မှ နားလည်ရမှန်းမသိကြောင်းနှင့် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများမှာ များစွာစိတ်ပျက်မိကြောင်း ပြောကြားသံတွေကိုလဲ ကြားသိနေရပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသူသားကျောင်းသူ လူငယ်များနှင့် မြန်မာ့အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် လာမည့် ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ နနက် (၉) တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးကို တညီတညွတ်တည်း ကန့်ကွက်မဲများ သွားပေးကြမည်ဟုလည်း သတင်းများရရှိပါတယ်။
ဂျေမိုး ဧပြီ ၂၂
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:25 PM4comments Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းခန့်က အာဟာရစာစောင်မှ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယူလာပေးတဲ့ စာအုပ်များကို ကျွန်မ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ စေတနာဖြင့် တကူးတကသယ်လာပေးသည့်အတွက်လည်း စိတ်ထဲမှ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိမိပါတယ်။ ရက်ပိုင်းခန့်လာရောက်သွားချိန်မှာ မအားလပ်နိုင်သောကိစ္စများကြောင့် အချိန်မှီသွားရောက်မတွေ့ဆုံလိုက်ခဲ့ရသည့်အတွက်လည်း အလွန်အမင်းအားနာမိပါတယ်။ အာဟာရစာစောင်မှ ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာအုပ်များအားလုံးဟာ ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေချည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာကြီးမောင်စွမ်းရည်၏ ဘာလဲဟဲ့မောင်စွမ်းရည်နှင့် ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေအမှတ်တရစာအုပ်များမှာ ကျွန်မအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ ဆရာမ မေငြိမ်းရေးသားပြုစုတဲ့ ဘလော့ခ်ဂါများအတွက်လက်စွဲကလည်း E-Book အနေနဲ့ပဲရှိတာကြောင့် ယခုလို စာအုပ်ကို လက်ဝယ်ရရှိလိုက်ရသည့်အတွက်လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်။
`တစ်နေ့တော့ ဆုံဖြစ်မှာပါ´လို့သာ နှုတ်ဆက်ပြောလိုက်ရပေမယ့် အဲဒီတစ်နေ့က ဘယ်နေ့လဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သေချာမသိသေးပါဘူး။ အာဟာရစာစောင်မှ မိတ်ဆွေများကို လူချင်းမတွေ့ဖူးသေးပေမယ့် စာပေသဘောအရ ၊ အမှန်တရားအတွေးအခေါ်အနေနဲ့ရော စိတ်ထဲမှ အလိုလိုရင်းနှီးခင်မင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ် .. ။ သတိတရနဲ့ ယခုလိုစေတနာများအတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိမိပါတယ်ရှင် .. ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:47 AM0comments Links to this post
စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှာကပ်ထားတဲ့ "စာ" ၊ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) ပေးစာနှင့် ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်းတို့ ပြောသောစကားများ
စင်္ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိမြန်မာများထံသို့ "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ဆန္ဒမဲပေးရန်အတွက် အကြောင်းကြားစာများကို စာတိုက်မှတဆင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ ပေးပို့လိုက်သောစာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ယနေ့ ၂၁ ရက် တနင်္လာနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်စုံစမ်းခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် လာမည့် ၂၅ရက် သောကြာနေ့တွင် စတင်ပြုလုပ်မည့် ဆန္ဒခံယူပွဲ အကြိုမဲပေးပွဲ မစတင်ခင် မဲဆန္ဒရှင်များ သိသင့်သိထိုက်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ ဆန္ဒခံယူပွဲကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ပေးထားသော "မဲရုံမှူးလမ်းညွန်" စသည့် ပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ မရှင်းလင်းသေးသော အချက်အလက်များကို မြန်မာသံရုံးမှ ဦးဆောင်ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလိုလားသူများမှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို သံအမတ်ကြီးအား လေးစားစွာဖြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိုကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၄င်းအပြင် ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများမှ ဆန္ဒမဲပေးပွဲကို တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ မဲများမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်ရှင်းလင်းလင်း ရေတွက်စစ်ဆေးနိုင်စေရန်အလို့်ငှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှလက်ခံမည်ဆိုပါလျှင် လိုအပ်သောအကူအညီများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့အရေးတက်ကြွသူများမှ အကူအညီပေးလိုကြောင်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်များကို သံမှူး ဦးကျော်ဆွေတင့်မှတဆင့် မြန်မာသံအမတ်ကြီးအား လေးစားစွာဖြင့် ကမ်းလှမ်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၄င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံမှူး ဦးကျော်ဆွေတင့်မှ သံအမတ်ကြီးအား အမြန်ဆုံးတင်ပြပြီး အမြန်ဆုံးအကြောင်းပြန်မယ်လို့ တုန့်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်း ၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်မှာ သံအမတ်ကြီးကိုယ်စား သံမှူး ဦးကျော်ဆွေတင့်မှ အကြောင်းပြန်ကြားရာမှာ ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်အပြည့်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီချင်စိတ်ရှိတဲ့အတွက် များစွာဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှာမူ မအားလပ်ပါသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေး ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တွေ့ဆုံဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် မြန်မာ့အရေးလိုလားသူများကို သံအမတ်ကြီးကိုယ်စား သံမှူးဦးကျော်ဆွေတင့်ကိုယ်တိုင် အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
"ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိမြန်မာများ သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် ရှင်းလင်းပြောကြားပေးရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံသံရုံးရှိ ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်း အား တာဝန်ပေးအပ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသော့ မြန်မာများကလည်း ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ထွန်းအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ဆန္ဒမဲပေးရေးနဲ့ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး သိရှိလိုသည်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဖြင့် မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသံရုံးမှနေ၍ စင်ကာပူစာတိုက်မှတဆင့် ဆန္ဒမဲများလာရောက်ပေးကြရန် ဖိတ်စာများပေးပို့နေကြောင်းကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့အတည်ပြုပြောကြားရာတွင် သံရုံးမှ ပေးပို့ခဲ့သော စာများကို လက်ခံရရှိသူများဆိုသည်မှာ ယခင်က ရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးသော သူများသာဖြစ်ကြောင်း ယခုစာများလက်ခံရရှိထားသူများဟာ (ယခင်အခွန်ပေးဆောင်ထားဖူးသူများ၊ သံရုံးထောက်ခံစာရယူထားဖူးသူများနှင့် သံရုံးသို့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးသူများ) စာရင်းဇယားအရလို့ ဆိုပါတယ်။ ၄င်းစာရင်းများကိုအခြေခံပြီး သံရုံးမှ စာများပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဦးမြင့်ထွန်းမှနေ၍ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ စာရင်းသံရုံးတွင် စီစဉ်ထားကြောင်းနှင့် ဆန္ဒမဲပေးရန် လာရောက်သူများကို သံရုံးမှ ပြင်ဆင်ထားသော ၄င်းစာရင်းနှင့် တိုက်ပြီး မဲပေးခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။ ရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း မဲဆန္ဒပေးလိုသူများအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ ကို သံရုံးသို့ ပြသနိုင်လျှင်ပင် မဲပေးနိုင်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ ဒါကတော့ ဦးမြင့်ထွန်းရဲ့ အာဘော်ပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ယနေ့သံရုံးတွင် ကပ်ထားသေားစာအရ-
-ကျောင်းသားဖြစ်ပါက ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်းသံရုံးမှ ထုတ်ပေးထားသော ထောက်ခံချက်၊
-နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္တူနှင့် အလုပ်သက်သေခံလက်မှတ်) တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာလျှက် မဲပေးကြရန် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
လို့ သံရုံး နံရံပေါ်မှာ တစ်မျိုးဆိုလိုပြန်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံမှာ အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အငြင်းပွားစရာကိစ္စ (၂) ခုရှိနေပါတယ်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍
သံရုံး နံရံပေါ်မှာ ကပ်ထားတဲ့စာ၊ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်းပြောကြားခဲ့သော စကားများတို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ကာ စာတိုက်မှတဆင့် ဖိတ်ကြားခဲ့သော "အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန် ဖိတ်ကြားခြင်း" စာပါအရ ကလည်း ယခုလိုဆိုပြန်ပါသေးတယ်။
၁။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို စင်ကာပူမြို့။ မြန်မာသံရုံးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၅⁄၂၆⁄၂၇⁄၂၈⁄၂၉) ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများအနေနှင့် အဆိုပါရက်များတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာသံရုံးသို့ လာရောက်ဆန္ဒမဲပေးကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အထက်ပါစာအပိုဒ်(၂)အရ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) ဟု လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ဖိတ်ကြားစာမှ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ယနေ့ သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမြင့်ထွန်း ပြောကြားခဲ့သောစကားများနှင့် သံရုံးနံရံမှာ ကပ်ထားသေား စာများ အားလုံးရဲ့  အဓိပ္ပာယ်တို့မှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ ပြဌာန်းလိုက်သော "ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ အမှတ် (၁/၂၀၀၈)" တို့နှင့် လုံးဝအဓိပ္ပာယ်များ ရောထွေးနေပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသောကြောင့် မဲဆန္ဒပေးလိုသူအများစုကိုေ၀၀ါးစေပါတယ် ထို့ကြောင့်မြန်မာသံရုံးမှ လာမည့် (၂၅)ရက် သောကြာနေ့မတိုင်ခင် အချိန်မှီ ရှင်းလင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကို လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ မှ ပြဌာန်းလိုက်သော ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ အမှတ် (၁/၂၀၀၈) အခန်း(၅) မဲစာရင်းများပြုစုခြင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှ အပိုဒ် ၁၁။ အပိုဒ်ငယ် (က) တွင် ဖေါ်ပြထားတာကတော့-
(က) ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒ ခံယူပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည်ပြီး ဖြစ်သည့် နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူနှင့် ယာယီသက်သေခံ လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတိုင်းသည် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။ ယင်းဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်း မဲစာရင်း တင်သွင်းရမည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ အမှတ် (၁/၂၀၀၈) အခန်း(၄) အပိုဒ် ၆၊ အပိုဒ်ငယ် (ဇ) နိုင်ငံခြားရှိ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖေါ်ပြထားတာကတော့-
(ဇ) နိုင်ငံခြားရှိ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူများ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာသံရုံးအကြီးအမှူး သို့မဟုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အကြီးအမှူးထံသို့ ပေးပို့ခြင်း။
အခြေခံအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မွေးရာပါအခွင့်အရေးအရ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူများအားလုံး ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရှိနိုင်ရပါမည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ဆန္ဒမဲပေးရေးအတွက် သံမှူး ဦးကျော်ဆွေတင့်စာပါ စာပိုဒ်(၂)အရ "မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍" လို့ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဆိုရာမှာ "မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ကဒ်ပြား၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော PR ကဒ်ပြား၊ EP ကဒ်ပြား S Pass ကဒ်ပြား၊ Work-Permit ကဒ်ပြားများ၊ Student pass၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်" အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အလုံ သက်သေဖြစ်သောကြောင့် အားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
စင်ကာပူရှိ မြန်မာ့အရေးလိုလားသူများမှ မြန်မာအများစု ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံသံရုံးသို့ (65) 6735 0209 / (65) 6735 1672 စသည့်ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ကြိုးစားဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် မြန်မာလိုဖြေကြားပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း တယ်လီဖုန်းပြေကြားပေးခဲ့သော Admin စင်္ကာပူနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီး Ms. Anna မှသာ ဖြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ Ms. Anna မှ မဲပေးရမည့် ပုံစံများကို သူမနားလည်ထားသလိုနှင့် သူမအား မြန်မာသံရုံးအထက်အရာရှိများမှာ ပြောပြထားသော အချက်အလက်များအရ အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
၁) ဆန္ဒမဲပေးသူများအနေနှင့် သံရုံးမှပေးသော စာရွက်တွင် အရင် ဖြည့်စွက်ရပါမည်။
၂) မဲဆန္ဒပေးရမည့် ဆန္ဒမဲကိုယူပြီး လျှို့ ဝှက် မဲပေးရပါမည်။
၃) မိမိရေးခြစ်ပြီးသော ဆန္ဒမဲကို အတူပါလာသော စာအိပ်ထဲထည့်၍ မဲပုံးရှိရာတွင် ထည့်ရပါမည်။ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုယ်စား ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာသံရုံးမှ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် အသက်လောက်အရေးကြီးတဲ့ "အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန်" ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားသူ စင်ကာပူသူ တရုတ်လူမျိုး အမျိုးသမီးမှ မဲဘယ်လို ဘယ်ပုံ ထည့်ရမည် ဆိုတဲ့ မဲရုံလမ်းညွန်ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အင်္ဂလ်ိပ်စကားနှင့်ရှင်းလင်း နေခြင်းကို သံအမတ်ကြီး အနေနှင့် မသင့်တော်ပါကြောင်းကို အလျဉ်းသင့်တုန်း လေးစားစွာဖြင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်တဲ့ -(၁) မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားများ ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
(၂) မဲပေးခွင့်ရှိသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို
စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သောကြာနေ့မတိုင်ခင် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာအများစု သိရှိနိုင်ရန် အမြန်ဆုံးပြန်ကြားပေးစေလိုကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:33 AM 1 comments Links to this post
Labels: Articles, News And Activities
ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ တံဆိပ်ခေါင်းများနှင့် ကြက်ခြေခတ်များရဲ့ သမိုင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကနေ စာတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို စင်ကာပူမှာရှိကြတဲ့ မြန်မာများထံကို ပေးပို့ နေတဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သို့ လော… သို့ လော.. ပြောကြ…ဆိုကြ…ရေးကြ… လုပ်နေကြချိန်မှာ သတင်းက တဖြေးဖြေး..အတည်ဖြစ်လို့ လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ နံနက်ရုံးကိုရောက် ရောက်ချင်းပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အရေးတကြီးပြောလာတယ်၊ သူလဲပဲ အလားတူ "စာတစ်စောင်ကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ စာတိုက်ကနေပေးပို့ လာလို့သူ့ အိမ်ကို ရောက်လာတယ်" တဲ့။ သူ့စကားဆုံးသွား…သွားချင်းပဲ…ရုတ်တရက်… သတိရလိုက်ပါတယ်… သူပြောမှ... သူကသံရုံးမှာ အခွန်သွားဆောင်ထားတာ ဘာမှတောင် မကြာသေးဘူးဆိုတာ ပြန်သိရလိုက်မိပါတယ် သူငယ်ချင်းပြောမှ သူများဆီလာတဲ့စာကို ခဏတာ တောင်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်..။
မြန်မာသံရုံးက ပေးပို့ လိုက်တဲ့ စာရဲ့့ပုံစံကတော့ - အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ တွေ့ မြင်နေရတဲ့ စာတွေနဲ့တစ်ပုံစံထည်းပါပဲ…။ သံအမတ်ကြီး(ကိုယ်စား) (ကျော်ဆွေတင့်၊ သံမှူး) ဆိုပြီးပါတယ် စာကိုကြည့်ရတာတော့ မူရင်းစာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်တစ်ကြိမ်ထိုးပြီးတာနဲ့မိတ္တူကူးစက်ပေါ်တင်ပြီး များများကူးယူထားကာ နောက်မှ စာအိတ်ထဲသွင်း တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ကာ စာတိုက်ပုံးထဲမှာ ထည့်လိုက်ပုံရပါတယ်။
စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးက ထွင်လိုက်ပုံများ မြန်မာတွေအများစု ဆန္ဒမဲပေးလို့ ရအောင် ကြေညာစာကိုရှင်းရှင်းလေး မြန်မာအများစုရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာ သွားကပ်ထားလိုက်ရင်လဲ ပြီးတာကို အခုတော့ သံရုံးကိုလာပြီး အခွန်ဆောင်သွားတုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ လိပ်စာတွေကို စင်ကာပူနိုင်ငံ စာတိုက်ကနေတဆင့် တိတ်တိတ်ကလေး လိုက်ပို့ နေတာတွေကို တွေ့့ရ မြင်ရတော့… သြော်….ငါတို့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ရုံးကလဲ.. ငါတို့ မြန်မာပြည်က.. စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေလိုပဲ "လွယ်တာကို ခက်သထက်ခက်အောင်" လုပ်နေပြန်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ လိုက်ရပြန်ပါတယ်…။
တကယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ဆန္ဒမဲပေးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖိတ်စာကို စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံး တံဆိပ်တုံးအမှတ်အသားနဲ့မြန်မာတွေအများစုရှိတဲ့ ပန်နီဆူးလားပလာဇာတို့ မြန်မာအများစု ၀င်ထွက်သွားလာတတ်တဲ့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ အများစုရှိတတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းတွေကို ပေးပို့ လိုက်လျှင်လဲ ရပါလျက်နဲ့ စာတိုက်မှတဆင့် စာတစ်စောင်ကို စင်ကာပူဒေါ်လာ 0.26 ဒေါ်လာ အကုန်အကျခံပြီး တစ်ယောက်ချင်းလိုက်လံပို့ နေတာဟာ ငွေကို အလကားဖြုန်းတီးရာရောက်ပါတယ်လို့ ပဲ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြန်ပါပြီ…။
ယခုလက်ရှိ စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ခန့် မှန်းခြေ လူငါးသောင်းလောက်ကို ပေးပို့ မယ်ဆိုရင်တောင် (S$ 0.26 ဒေါ်လာ x လူ 50000 ) = S$13,000.00 ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ် လူရှစ်သောင်းဆိုရင် S$20,800.00 နဲ့လူတစ်သိန်းဆိုရင် စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 26,000.00 တံဆိပ်ခေါင်းဘိုးကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုန်ကျစရိတ်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၈၅၀ ကျပ်လောက်နဲ့ သာမြှောက်လိုက်ရင်တောင် ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၂၂၀ ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်၊ တံဆိပ်ခေါင်းဈေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကို ဤနေရာမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အင်းလေ .. သူတို့ အတွက်က ပိုက်ဆံရှာရတာ လွယ်သကိုးဗျနော်။ သံရုံးတံခါးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဒေါ်လာတွေက ဟောကနဲ ဟောကနဲ ၀င်လာတတ်တာကိုးဗျ ရှာရတဲ့သူတွေမှာတော့……။
စာတစ်စောင်အတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာတွေ သုံးနေပေမယ့် တမျိုးသားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ် အသက်တမျှ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" စာအုပ်ကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင် ဘယ်မှာရယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးမှပေးပို့ ခဲ့တဲ့ စာထဲမှာ တလုံးတပါဒမျှ ဂဃနဏ ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ သို့ သော်လည်း စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း ကို မူရင်းအတိုင်းဖတ်လိုသူများအတွက် http://www.myanmarinformation.org/ မြန်မာစစ်အစိုးရကိုလိုလားတဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုမှ Download ရယူပြီးမူရင်းအတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဖတ်ချင်တဲ့သူများ အဲဒီဝက်ဆိုဒ်မှာ သွားပြီး ဒေါင်းလုပ်ကြသလို ဖြန့် ဝေပေးချင်သူများလည်း ဆက်လက်ဖြန့် ဝေပေးနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးချင်ပါတယ်……..။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ ပေးပို့ လိုက်တဲ့ စာအိတ်ပေါ်မှာတော့ သံရုံးလိပ်စာ အပြည့်အစုံ ပါလာပေမယ့်လည်း သံရုံးကတရားဝင်ပေးပို့ တဲ့စာထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးတံဆိပ်တုံးပါမလာခဲ့ပါဘူး။ သံရုံးလိပ်စာမှာလည်းပဲ သံရုံးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ရာ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဖက်စ် အီးမေးလ်..အစရှိတဲ့ အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုသူတွေအတွက် ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်တွေ ဘာဆိုဘာမှဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူသံရုံးကို ဆက်သွယ်လိုသူများအတွက် လိပ်စာအပြည့်အစုံကို စေတနာ အစစ်အမှန်ဖြင့် ရှာဖွေပြီး ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…ဆက်သွယ်ချင်သူများအနေနဲ့ 
"ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ကို…. သံရုံးတွင် မဲပေးရာတွင်.. မဲပေးရမယ့် ပုံစံနှင့်… "ဘယ်လိုဘယ်ပုံ.. သံရုံးမှ မဲများရေတွက်မယ်..ဘယ်လိုဘယ်ပုံကြေညာပေးမလဲ" စသည်ဖြင့်…စသည်ဖြင့်…တို့ ကို… လွတ်လပ်စွာဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်..။ လိပ်စာနဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်….။
15, ST. MARTIN'S DRIVE, SINGAPORE 257996
Tel :(65) 67350209, (6) LINES
Fax : (65) 67356236
Email : ambassador@mesingapore.con.sg
Site web : www.mesingapore.org.sg
မြန်မာသံရုံးမှ ပေးပို့ လိုက်သော စာပါအကြောင်းအရာများအရ သံရုံးကို မဲသွားပေးလိုတဲ့ မြန်မာများ သိသင့် သိထိုက်တာလေးတွေကို တော့အနည်းငယ် ပြောပြစေလိုပါတယ်……။
စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှ ပေးပို့ လိုက်တဲ့ စာထဲမှ ဒုတိယအပိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့-
၂၊ သို့ ဖြစ်ပါ၍ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများအနေနှင့် အဆိုပါရက်များတွင် နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍ မြန်မာသံရုံးသို့ လာရောက်ဆန္ဒမဲပေးကြပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အထက်ပါစာပိုဒ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ စင်ကာပူမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ ရာ အနည်းငယ် တင်ပြပေးလိုပါတယ် စာပိုဒ်အရ "မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ⁄ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုင်ဆောင်၍" လို့ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဆိုရာမှာ "မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားမှတ် မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ကဒ်ပြား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားသော PR ကဒ်ပြား EP ကဒ်ပြား S Pass ကဒ်ပြား Work-Permit ကဒ်ပြားများ" အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အလုံ သက်သေဖြစ်သောကြောင့် အားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါမှ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်နေသူများကို လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှင်းပြထားပေးစေလိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခါရှုပ်ထွေးစေတဲ့ အရာကတော့ "ကျွန်တော် အခွန်မဆောင်ထားလို့မဲပေးလို့ ရပါ့မလား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေပါ - အခုလက်ရှိ "ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း" ကို "မဲပေးတဲ့ကိစ္စ နဲ့အခွန်ကိစ္စဟာ ဘာမှမပတ်သက်ဘူး" ဆိုတာကို စင်ကာပူမှာရှိတဲ့သူများ အားလုံးကို နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခွန်ဆောင်ထားတာ မဆောင်ထားတာတွေကို ကိုလုံးဝစဉ်းစားစရာမလိုပဲ မိမိမှာရှိတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ တရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ ကဒ်ပြားဟာ မိမိ ဆန္ဒမဲပေးဖို့ ရာ လုံလောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောအထောက်အထား ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ဖို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးဖိတ်ခေါ်စာအရလည်း အကျုံးဝင်တာကြောင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆန္ဒမဲသွားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား….။
ဒီသတင်းအချက်အလက်များနဲ့ပတ်သက်လို့ မိမိနှင့် နီးစပ်ရာမှ မြန်မာများကို ဆက်လက်ဝေငှပေးစေလိုပါတယ်၊ စင်ကာပူ 0.26 ဒေါ်လာတန် တံဆိပ်ခေါင်းပါစာ လက်ခံရရှိထားသူများ အနေနဲ့ လည်း ရာဇ၀င်သမိုင်းမှာ တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့မယ် အာဏာရှင်တို့ ကျဆုံးခန်းအတွက် မဝေးတော့တဲ့ ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့မရောက်ခင် ကြက်ချေခတ်များရဲ့ သမိုင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နီးစပ်ရာ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအား ၀ိုင်းဝန်းစည်းရုံးကြပါလို့လေးစားစွာဖြင့် ပန်ကြားလိုပါတယ်။
"ခြင်္သေ့ကျွန်းမှ ကြက်ခြေခတ် အပိုင်းအစတွေဟာ ငါတို့ မြန်မာ့သမိုင်းအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်စေရမယ်"
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:43 PM2comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:41 PM 1 comments Links to this post
By: J Moe
Almost 100,000 Burmese nationals in Singapore are looming to cast "Vote No" at the forthcoming constitutional referendum in which the military is occupying 25% of the seats in parliament.
On April 13, the words "No" appeared at several locations in Singapore, whilst Burmese people celebrated water festival at Toa Payoh Burmese Buddhist Temple and Eunos Mingala Vihara (Buddhist Temple).
(Original News source from BBC Burmese, www.irrawaddy.org and from the various bloggers; http://www.ko-htike.blogspot.com, http://myochitmyanmar.blogspot.com/, http://linletkyalsin.blogspot.com/ and http://arzarni.blogspot.com/ )
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:41 PM 1 comments Links to this post
စစ်ကျွန်ဘ၀ မရောက်ချင်သူမှန်သမျှ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်မဲကို သွားထည့်ကြ
စင်္ကာပူရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ၁၀.၄.၂၀၀၈ ရက်စွဲဖြင့် သံမှူးလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော၊ အခြေခံဥပဒေမှုကြမ်းအတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန်ဖိတ်ကြားခြင်း ဆိုသော မိတ္တူစာများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော မြန်မာလူမျိုးများ၏ အိမ်သို့ စာတိုက်မှ တဆင့်ပေးပို့ထားသည်ကို ၁၄.၄.၂၀၀၈ နေ့က လက်ခံရရှိကြောင်း မိတ်ဆွေများမှတဆင့်ကြားသိရပါသည်။ ထို သံရုံးမှပို့လိုက်သော ဖိတ်ကြားစာမှာ စင်္ကာပူရှိ မြန်မာလူမျိုးတချို့ လက်ခံရရှိခြင်း မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတရပ်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စကို ၊ လူနည်းစု သာ သိရှိနိုင်ငံ လုပ်ထားခြင်းမှာ သဘာဝ သိပ်မကျဟု မြင်သည်။ စစ်အစိုးရဘက်မှ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံကို ထောက်ခံမဲရရှိအောင် ကန့်ကွက်မဲပေးရန် မလွန်ဆန်ဝံ့သည့် လူများဆီသို့သာ ၄င်းဖိတ်ကြားစာများ ပေးပို့ခြင်းပေလော…။ တွေးစရာများက အများအပြား။ ဒီလောက်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စမျိုးကို သံရုံးမှ ပြီး၊ပြီးရောမလုပ်သင့်ပေ။ သူတို့လုပ်လျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ငြိမ်ခ၊ံလက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ပေ။ စုံစမ်းရမည်၊မေးမြန်းရမည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး အလုပ်သမား၊ကျောင်းသား၊ရဟန်းသံဃာ လူတန်းစားအားလုံး အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူမှန်သမျှ သံရုံးတွင် တရားဝင်မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ပေးရမည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ တာဝန်တခုဖြစ်သည်။ ဖိတ်ကြားစာထဲတွင် ဧပြီ ၂၅၊၂၆။၂၇၊၂၈ နှင့် ၂၉ရက်များတွင် လာရောက်၍ မဲပေးနိုင်ကြောင်း ကြေငြာထားသော်လည်း၊ ကျွန်တော့်အနေနှင့် အကြံပေးလိုသည်မှာ ၂၅၊၂၆၊၂၈၊၂၉ နေ့များတွင် လုံးဝမဲသွားမပေးဘဲ၊ လူအများစုသွားနိုင်မည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၇.၀၄.၂၀၀၈ ကို Polling Day အဖြစ်သတ်မှတ်၍ စင်္ကာပူရှိ၊ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး စုစုစည်းစည်း သွားရောက် မဲပေးကြစေလိုပါသည်။ မဲပေးရမည့် အချိန်မှာ နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီ အထိ ဖြစ်သဖြင့်၊ ထိုအချိန်ကာလအတွင်း မည်သည့်အချိန်မဆို သွားရောက်မဲပေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်တိ်ုင်းပြည်၊ကိုယ့်လူမျိုးကို ကယ်တင်ချင်သူမှန်သမျှ၊ ကိုယ့်တိ်ုင်းပြည်၊ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိူးသူမှန်သမျှ၊ စစ်ကျွန်ဘ၀မရောက်ချင်သူမှန်သမျှ ၂၇.၄.၂၀၀၈နေ့တွင်၊ သံရုံးမှာ ကန့်ကွက်မဲကို သွားထည့်ကြပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားအင်အားစုများကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားလိုသည်မှာ “ငါသွားထည့်လို့ရော ဘာဖြစ်လာမှာမို့လည်း” ဆိုသော အတွေးများကို ဖယ်ရှားပြီး၊ ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ဆန္ဒအမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြီး မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ စစ်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကန့်ကွက်မဲလေးတချပ်ဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီအားဖြည့်စေလိုပါသည်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာအလုပ်သမားထု၊ကျောင်သားထုအားလုံးအား၊ စစ်အစိုးရရေးဆွဲသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၏ ဆိုးကျိုးများကို သိနားလည်အောင်ရှင်းပြ၍ ဤသို့ကြောင့် ကန့်ကွက်မဲပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးစည်းရုံးလုပ်ရှားမှုများ အလျင်အမြန်လုပ်သင့်ကြပေပြီ။
နိဂုံးချုပ်အဖြစ်ပြောလို သည်မှာ ရှေ့လာမည့် တနင်္ဂနွေ ၂၇.၄.၂၀၀၈ ကို စင်္ကာပူရှိမြန်မာလူမျိုးများ၏ မဲဆန္ဒပေးသည့်နေ့ ဟု သတ်မှတ်၍ စည်းစည်းလုံးလုံး တညီတညွှတ်တည်း သံရုံးသို့ ကန့်ကွက်မဲသွားထည့်ကြပါ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ကိုယ့်လူမျိုးကို ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကယ်တင်ကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရန် ရည်သန်လျှက်……….။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:41 PM0comments Links to this post
Labels: News And Activities, Strongly Suggestion
စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုမှစ၍……မဲပြားပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီ
အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စင်ကာပူသံရုံးမှတဆင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာတွေအတွက် "အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေးအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန်ဖိတ်ကြားခြင်း" ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ ငါတို့"ဆန္ဒအမှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်ခွင့်ရတော့မယ်ဟေ့" လို့စိတ်ထဲမှာတွေး ရင်းပျော်လိုက်ရတာ……..။
ယုံရမလို မယုံရမလိုဖြစ်နေချိန်မှာပဲ ဘီဘီစီ မနက်ပိုင်းရေဒီယိုအသံလွှင့် အစီအစဉ်မှာ ဦးကိုကိုအောင်နဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးမှ ပေးပို့ စာကို ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့ ၊ နေ့ စွဲပါ တံဆိပ်တုံးနဲ့ ကိုယ်တိုင် လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ကိုရန်အောင် နဲ့ အင်တာဗျူး ထားတာကို နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ ဟုတ်မှဟုတ်လေရဲ့ လားလို့ ဖြစ်နေတဲ့ သံသယစိတ်တွေကတော့ နဲနဲ လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်လဲ သံသယစိတ် ကတော့ရှိနေသေးပါသေးတယ်။ ဧပြီလ (၁၂) ရက်နေ့ က စနေနေ့ ဖြစ်နေပြန်တော့ စာတိုက်က စနေနေ့အလုပ်လုပ်သလား? မလုပ်ဘူးလား? သံရုံးက စနေနေ့အလုပ်လုပ်လား? မလုပ်ဘူးလား? ဆိုတာကိုလည်း အတိအကျမသိလေတော့…. ယုံတစ်ဝက် မယုံတစ်ဝက် နဲ့…….အို…
"မြန်မာသံရုံးကနေ စာတစ်တန် …ပေတစ်တန်နဲ့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ…..
ဟုတ်…. ဟုတ်…မဟုတ်…ဟုတ် "Vote"… ရမှာပဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ…"
ကဲ….သူငယ်ချင်းတို့ ရေ စင်ကာပူမှာနေထိုင်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသူအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် လူတွေ တစ်သိန်းလောက်ရှိကြသတဲ့….ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ "Vote No" သင်္ကြန်ဆိုတော့လဲ လူငယ်တွေအပြည့်ပဲမဟုတ်လား......မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲ ဆိုတော့လဲ ဒို့လူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား…။
စင်ကာပူကလူငယ်တွေ "သီးလေးသီးအငြိမ့်ပွဲဟေ့" ဆိုပြန်တော့လဲ ရှေ့ ဆုံးကနေ အားနဲ့ မာန်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြသေးတယ်မဟုတ်လား။
စက်တင်ဘာမှာ ပြည်တွင်းကရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့ အတူ "စင်ကာပူမျိုးချစ်မြန်မာပွဲ" ဆိုရင်လဲ ငါတို့ အားလုံး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လား……။
ဒီတစ်ခါတော့ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ…..ရတောင့်ရခဲ အခွင့်အရေးနဲ့ငါတို့ တိုင်းပြည်အတွက်ရယ်… ငါ့တို့ သားစဉ်မြေးဆက် ဒုက္ခပင်လယ်မဝေနေတာတွေ ရပ်တန့် သွားရအောင် …ငါတို့ တစ်တွေ ကန့် ကွက်မဲတွေ သွားပေးကြစို့ သူငယ်ချင်း…….။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ….. "စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာ ငါတို့ ပြည်သူတွေ စစ်ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့ရရှာတဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအတွက် သွေးကြွေးဆပ်ဖို့ အတွက်…. မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ဖို့ …. စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ..´။
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ….စစ်အစိုးရရဲ့အကျဉ်းချခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးနဲ့ ၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရယ်၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ မမျှအောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ရယ်… ငါတို့ တစ်တွေဟာ ဒီအချိန်မှာ မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ခြင်းဖြင့် ပေးဆပ်သွားသူတွေရဲ့ အသက်သွေး၊ချွေးတွေကို ဂုဏ်ပြုကြရအောင်သူငယ်ချင်း ...။
ဒါဟာ ငါတို့တတွေရဲ့ ….တာဝန်ပဲ ………………….…..။
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ………မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ခွင့် ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးဟာ…… ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှာလဲ မရနိုင်သလို ငါတို့ တစ်တွေ နှစ်တွေအများကြီး….. အသက်တွေအများကြီး……. ဘ၀တွေအများကြီးနဲ့ ပေးဆပ်ပြီးမှ ရကြရတာဆိုတော့ .. မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ဖို့ …. စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ……။
စင်ကာပူမှာ မင်းတို့ငါတို့ရှာ ထားတဲ့ ဒေါ်လာတွေကို အခွန်အဖြစ် သိမ်းယူပြီး မင်းတို့ ငါတို့ အတွက် ဘာမှပြန်လုပ်မပေးတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင် အစိုးရကို ပြတ်ပြတ်သားသားကန့် ကွက်မဲတွေပေးကြစို့ … စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ……။
လက်ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးဟာ မြန်ပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ အတွက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်….. တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အချိန်ကို လေးစားကာ ပြိုင်တူ တက်တက်ကြွကြွ သံရုံးကို သွားရောက်ပြီး "ပြတ်ပြတ်သားသားကန့် ကွက်မဲထည့်ကြပါစို့ " လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….။
အဲဒီတော့......သူငယ်ချင်းတို့ရေ ငါတို့ တတွေ …………..အချိန်တူ ……..နေရာတူ …..ပြိုင်တူ …… အသံတူ … ဆန္ဒမဲတွေအတူတူပေးရအောင်…အားလုံးပြိုင်တူ သွားနိုင်မယ့်နေ့ ရက်ကတော့
"ဧပြီလ (၂၇) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်(၉း၀၀ နာရီ မှာ အားလုံးပြိုင်တူ)" သွားရောက်ပြီး ကန့် ကွက်မဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပေးကြပါစို့ လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုသာ လူတွေအများကြီးနဲ့စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကို သွားပြီး တစ်နေ့ ထဲ၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ အချိန်တူ၊ နေရာတူ(သံရုံး)၊ ကန့် ကွက်မဲများ ၀ိုင်းဝန်းပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ။
" ပြည်သူဟာ အင်အားဆိုတာကို ငါတို့ သက်သေပြနိုင်မယ်" …အရေးအကြီးဆုံးကတော့…. ငါတို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ငါတို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို "စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာတွေကတော့….စောစောစီးစီး… မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီဟေ့" ဆိုတာကိုပြသလိုက်ဖို့ ပါပဲ……
မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ သူတွေကို နိုင်ငံတစ်ကာက သတင်းသမားတွေအနေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခွင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခွင့်မရပေမယ့် သူငယ်ချင်းတို့ ရေ… စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေကိုတော့ Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခု အဖြစ်နဲ့ပြည်သူ့ ဆန္ဒအ စစ်အမှန်တွေကို ကြက်ခြေခတ်မဲပြားလေးတွေနဲ့ ……. သက်သေပြကြစို့ သူငယ်ချင်း……။
မြန်မာပြည်နေရာအနှံအပြားကနေလာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး တိုင်းရင်းသားအများစု စုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့ စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခု မှနေပြီး ကန့် ကွက်မဲပေးတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတစ်ကာက သိအောင် ငါတို့ စင်ကာပူမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ညီတူညာတူ ပြကြစို့ သူငယ်ချင်း…… "မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ် ပြည်သူ့ အောင်ပွဲမှတ်" ဆိုတာကို မမေ့နဲ့ သူငယ်ချင်း……"မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ် တွေဟာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေအတွက်တော့ အောင်ပွဲလက်မှတ်ပဲပေါ့ သူငယ်ချင်း ………… ………………...။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:28 PM5comments Links to this post
Labels: Articles, Strongly Suggestion
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ဆန္ဒမဲပေးဖို့စာထွက်ရှိလာပါပြီ .. ။ ဘယ်နားကထွက်လာလဲတော့ မသိပါဘူး။ စင်္ကာပူရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ။ နိုင်ငံသားအားလုံး ၂၅ရက်မှ ၂၉ရက်နေ့ထိ မြန်မာသံရုံးမှာ ဆန္ဒမဲသွားပေးနိုင်ကြပါပြီ .. ။ မိမိပတ်ဝန်းကျင်သက်ဆိုင်ရာလူများကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းပြောကြားပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင် .. ။ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆန္ဒတွေအတိုင်း ကန့်ကွက်မဲသွားပေးကြပါစို့ .. ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:18 AM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:51 PM 1 comments Links to this post
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားအားလုံးသို့ တိုက်တွန်းနိူးဆော်ခြင်း
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ (၁၁.၄.၂၀၀၈) နေ့မှစ၍ (၂၀.၄.၂၀၀၈)နေ့ အထိ၊ (၁၀)ရက်တိတိ ဒီနှစ်မှာ ပိတ်တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ မည်သည့် အရေးတကြီး ကိစ္စများရှိသည်ကို မည်သူမျှမသိရပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အချက်မှာ၊ ယနေ့ထက်တိုင် မြန်မာသံရုံးမှ နေ၍၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားအားလုံးအား လာမည့် မေလ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ် လူထု၏ သဘောထားဆန္ဒခံယူပွဲနှင့်ပက်သက်၍ တစွန်းတပါဒမျှ ထုတ်ပြောခြင်း၊ ကြေငြာချက်ထုတ်ခြင်းများ၊ မလုပ်သေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ အခြားပြည်ပနိုင်ငံများရှိ သံရုံးများတွင် မေလ (၁၀) ရက်နေ့ ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား တရားဝင်ဖြစ်နေသူမှန်သမျှ မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း၊ မဲပေးမည့်သူများသည် သက်ဆိုင်ရာသံရုံးသို့ Register လာလုပ်ကြရန် ကြေငြာထားခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း စင်္ကာပူရှိမြန်မာသံရုံးမှာ ဤကဲ့သို့မဟုတ် လုံးဝတိတ်ဆိတ်စွာနေ၊နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤသို့ သံရုံးမှနေ၍ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မဲပေးရမည်၊မပေးရမည်ကို စင်္ကာပူရှိမြန်မာလူထုအား အသိမပေးဘဲ နေနေသည်မှာ စင်္ကာပူရှိ မြန်မာလူထုအား မည်သို့၊မည်ပုံ အကောက်ကြံ၊မလိမ့်တပါတ်လုပ်ရန် ကြံစည်နေခြင်းလော ဟု၊တွေးစရာဖြစ်လာပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသား အားလုံးတွင်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသော်ငြားလည်း ကျွန်တော်တို့ ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို ရယူတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သံရုံးဖက်မှ KEEP QUIETနေ နေ၍၊ ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်း KEEP QUIET မနေသင့်ပါ။ ထိုသို့နေ နေပါက၊ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမည့်အပြင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးအတွက် နစ်နာစရာများစွာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အချိ်န်လွန်မှ နောင်တရ ရခြင်းများ မဖြစ်စေလိုပါ။ သို့ပါ၍ စကာင်္ပူရောက် မြန်မာလူမျိုးများမှနေ၍ သံရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်သွား၍၎င်း၊ စာတိုက်မှတဆင့် စာရေးမေးမြန်း၍သော်၎င်း လူထုဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် မည်သို့မည်ပုံ မဲပေးကြရမည်ကို မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်ကြပါပြီ ဟု ကျွန်တော်တို့အနေနှင့်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:51 AM0comments Links to this post
စင်္ကာပူနိုင်ငံ မင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်ကျင်းပမည့် နှစ်သစ်သင်္ကြန် ဖိတ်ကြားလွှာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:22 PM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:00 AM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 7:52 AM0comments Links to this post
ဧပြီလ ၇ ရက် မနက်ခင်းကို
ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ မနက်ဟာ
မျိုးဂုဏ် ရိုးဂုဏ် ဇာတိမာန်ဂုဏ် ထက်သန်တဲ့
ခွင့်လွှတ်ပါ အမေ ။
အသက် ကိုးဆယ့်နှစ်နှစ် ဆိုတာ
သားတို့ ကြိုးစားဖော်ဆောင်သွားပါ့မယ် အမေ။
အမေမာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ၊
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:15 AM0comments Links to this post